Numeri 26 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
26 Kwathi emva kwesibetho eso,+ wathetha uYehova kuMoses nakuEleyazare unyana ka-Aron umbingeleli wathi: 2 “Balani inani lendibano iphela yoonyana bakaSirayeli ukususela kwabanamashumi amabini eminyaka ubudala ukusa phezulu, ngokwezindlu zooyise, bonke abaphuma umkhosi kwaSirayeli.”+ 3 UMoses noEleyazare+ umbingeleli bathetha nabo emathafeni ayinkqantosi akwaMowabhi+ ngaseYordan eYeriko,+ besithi: 4 “[Babaleni] ukususela kwabanamashumi amabini eminyaka ukusa phezulu, kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses.”+ Ngabo ke aba oonyana bakaSirayeli abaphumayo ezweni laseYiputa: 5 NguRubhen, izibulo likaSirayeli;+ ngabo aba oonyana bakaRubhen: KuHanoki+ yintsapho yamaHanoki; kuPalu+ yintsapho yamaPalu; 6 kuHetseron+ yintsapho yamaHetseron; kuKarmi+ yintsapho yamaKarmi. 7 Zizo ezo iintsapho zamaRubhen, yaye ababhaliswayo kuzo baba ngamashumi amane anesithathu amawaka anamakhulu asixhenxe namashumi amathathu.+ 8 Unyana kaPalu yayinguEliyabhi. 9 Ngabo aba oonyana bakaEliyabhi: NguNemuweli noDatan noAbhiram. Lo Datan+ nalo Abhiram+ ngabo babizwayo yindibano, basukuzana noMoses noAron kwindibano kaKora,+ ekusukuzaneni kwabo noYehova. 10 Ngoko ke umhlaba wawuvula umlomo wawo waza wabaginya.+ UKora yena, wafa ekufeni kwendibano ngethuba umlilo wadla amadoda angamakhulu amabini anamashumi mahlanu.+ Yaye aba ngumfuziselo.+ 11 Noko ke, bona oonyana bakaKora abazange bafe.+ 12 Ngabo aba oonyana bakaSimeyon+ ngokweentsapho zabo: KuNemuweli+ yintsapho yamaNemuweli; kuYamin+ yintsapho yamaYamin; kuYakin+ yintsapho yamaYakin; 13 kuZera yintsapho yamaZera; kuShawule+ yintsapho yamaShawule. 14 Zizo ezo iintsapho zamaSimeyon: amashumi amabini anesibini amawaka anamakhulu mabini.+ 15 Ngabo aba oonyana bakaGadi+ ngokweentsapho zabo: KuTsefon yintsapho yamaTsefon; kuHagi yintsapho yamaHagi; kuShuni yintsapho yamaShuni; 16 kuOzni yintsapho yamaOzni; kuEri yintsapho yamaEri; 17 kuArodi yintsapho yama-Arodi; kuAreli+ yintsapho yama-Areli. 18 Zizo ezo iintsapho zoonyana bakaGadi, ngokwababhaliswayo kuzo: amashumi amane amawaka anamakhulu mahlanu.+ 19 Oonyana bakaYuda+ yayinguEre+ no-Onan.+ Noko ke, uEre no-Onan bafela ezweni laseKanan.+ 20 Ngabo aba oonyana bakaYuda, ngokweentsapho zabo: KuShela+ yintsapho yamaShela; kuPeretse+ yintsapho yamaPeretse; kuZera+ yintsapho yamaZera. 21 Ngabo aba oonyana bakaPeretse: KuHetseron+ yintsapho yamaHetseron; kuHamuli+ yintsapho yamaHamuli. 22 Zizo ezo iintsapho zakwaYuda,+ ngokwababhaliswayo kuzo: amashumi asixhenxe anesithandathu amawaka anamakhulu mahlanu.+ 23 Ngabo aba oonyana bakaIsakare+ ngokweentsapho zabo: KuTola+ yintsapho yamaTola; kuPuva yintsapho yamaPuva; 24 kuYashubhi yintsapho yamaYashubhi; kuShimron+ yintsapho yamaShimron. 25 Zizo ezo iintsapho zakwaIsakare, ngokwababhaliswayo kuzo: amashumi amathandathu anesine amawaka anamakhulu mathathu.+ 26 Ngabo aba oonyana bakaZebhulon+ ngokweentsapho zabo: KuSerede yintsapho yamaSerede; kuElon yintsapho yamaElon; kuYaleli+ yintsapho yamaYaleli. 27 Zizo ezo iintsapho zamaZebhulon, ngokwabo babhaliswayo kuzo: amashumi amathandathu amawaka anamakhulu mahlanu.+ 28 Oonyana bakaYosefu+ ngokweentsapho zabo yayinguManase noEfrayim.+ 29 Ngabo aba oonyana bakaManase:+ KuMakire+ yintsapho yamaMakire. UMakire wazala uGiliyadi.+ KuGiliyadi yintsapho yamaGiliyadi. 30 Ngabo aba oonyana bakaGiliyadi: KuIyezere+ yintsapho yamaIyezere; kuHeleki yintsapho yamaHeleki; 31 kuAsriyeli yintsapho yama-Asriyeli; kuShekem yintsapho yamaShekem; 32 kuShemida+ yintsapho yamaShemida; kuHefere+ yintsapho yamaHefere. 33 Ke uTselofehadi unyana kaHefere wayengenanyana, kodwa eneentombi,+ yaye amagama eentombi zikaTselofehadi yayinguMahala noNowa, uHogela, uMilka noTirtsa.+ 34 Zizo ezo iintsapho zakwaManase, yaye ababhaliswayo kuzo babengamashumi amahlanu anesibini amawaka anamakhulu asixhenxe.+ 35 Ngabo aba oonyana bakaEfrayim+ ngokweentsapho zabo: KuShutela+ yintsapho yamaShutela; kuBhekere yintsapho yamaBhekere; kuTahan+ yintsapho yamaTahan. 36 Ngabo aba oonyana bakaShutela: KuEran yintsapho yamaEran. 37 Zizo ezo iintsapho zoonyana bakaEfrayim,+ ngokwababhaliswayo kuzo: amashumi amathathu anesibini amawaka anamakhulu mahlanu. Ngabo abo oonyana bakaYosefu ngokweentsapho zabo.+ 38 Ngabo aba oonyana bakaBhenjamin+ ngokweentsapho zabo: KuBhela+ yintsapho yamaBhela; kuAshbheli+ yintsapho yama-Ashbheli; kuAhiram yintsapho yama-Ahiram; 39 kuShefufam yintsapho yamaShefufam; kuHufam+ yintsapho yamaHufam. 40 Oonyana bakaBhela nguArdi noNahaman: KuArdi yintsapho yama-Ardi; kuNahaman+ yintsapho yamaNahaman. 41 Ngabo aba oonyana bakaBhenjamin+ ngokweentsapho zabo, yaye ababhaliswayo kubo baba ngamashumi amane anesihlanu amawaka anamakhulu mathandathu.+ 42 Ngabo aba oonyana bakaDan+ ngokweentsapho zabo: KuShuham yintsapho yamaShuham. Zizo ezo iintsapho zakwaDan+ ngokweentsapho zabo. 43 Zizonke iintsapho zamaShuham, ngokwababhaliswayo kuzo, zaba ngamashumi amathandathu anesine amawaka anamakhulu mane.+ 44 Ngabo aba oonyana baka-Ashere+ ngokweentsapho zabo: KuImna+ yintsapho yamaImna; kuIshvi+ yintsapho yamaIshvi; kuBheriya yintsapho yamaBheriya; 45 koonyana bakaBheriya: kuHebheri yintsapho yamaHebheri; kuMalekiyeli+ yintsapho yamaMalekiyeli. 46 Igama lentombi ka-Ashere yayinguSera.+ 47 Zizo ezi iintsapho zoonyana baka-Ashere,+ ngokwabo babhaliswayo kuzo: amashumi amahlanu anesithathu amawaka anamakhulu mane.+ 48 Ngabo aba oonyana bakaNafetali+ ngokweentsapho zabo: KuYatseli+ yintsapho yamaYatseli; kuGuni+ yintsapho yamaGuni; 49 kuYetsere+ yintsapho yamaYetsere; kuShilem+ yintsapho yamaShilem. 50 Zizo ezi iintsapho zakwaNafetali+ ngokweentsapho zabo, yaye ababhaliswayo kubo baba ngamashumi amane anesihlanu amawaka anamakhulu mane.+ 51 Ngabo aba ababhaliswayo koonyana bakaSirayeli: amakhulu amathandathu ananye amawaka anamakhulu asixhenxe anamashumi mathathu.+ 52 Emva koko wathetha uYehova kuMoses, esithi: 53 “Babele ilizwe elo libe lilifa ngokwenani lamagama.+ 54 Abaninzi uze ulandise ilifa labo, yaye abambalwa uze ulinciphise ilifa labo.+ Ilifa ngalinye limele lilinganiselwe ngokwabo babhalisiweyo. 55 Ilizwe lifanele lahlulwe kuphela ngeqashiso.+ Bafanele bafumane ilifa ngokwamagama ezizwe zooyise. 56 Lifanele lahlulwe ilifa labo ngokumiselwa ngeqashiso phakathi kwabaninzi nabambalwa.” 57 Ngabo aba ababhaliswayo kubaLevi+ ngokweentsapho zabo: KuGershon+ yintsapho yamaGershon; kuKohati+ yintsapho yamaKohati; kuMerari+ yintsapho yamaMerari. 58 Zizo ezi iintsapho zabaLevi: yintsapho yamaLibhini,+ yintsapho yamaHebron,+ yintsapho yamaMahali,+ yintsapho yamaMushi,+ yintsapho yamaKora.+ UKohati+ wazala uAmram.+ 59 Igama lomfazi ka-Amram yayinguYokebhede,+ intombi kaLevi, awathi umfazi kaLevi wamzalela yona eYiputa. Ekuhambeni kwexesha yamzalela uAmram uAron noMoses noMiriyam udade wabo.+ 60 UAron wazalelwa uNadabhi noAbhihu,+ uEleyazare noItamare.+ 61 Kodwa uNadabhi noAbhihu bafa ngenxa yokusondeza umlilo ongekho sikweni phambi koYehova.+ 62 Ababhaliswayo kubo baba ngamashumi amabini anesithathu amawaka, yonke into eyindoda ukususela konyanga-nye ubudala ukusa phezulu.+ Kuba babengabhaliswanga phakathi koonyana bakaSirayeli,+ ngokuba babenganikwanga lifa phakathi koonyana bakaSirayeli.+ 63 Ngabo aba ababhaliswayo nguMoses noEleyazare umbingeleli ekubhaliseni kwabo oonyana bakaSirayeli kumathafa ayinkqantosi akwaMowabhi ngaseYordan eYeriko.+ 64 Kodwa phakathi kwaba kwakungekho mntu wababebhaliswe nguMoses noAron umbingeleli ekubhaliseni kwabo oonyana bakaSirayeli entlango yaseSinayi.+ 65 Ngokuba uYehova wayethe ngabo: “Ngokuqinisekileyo baya kufela entlango.”+ Ngoko akusalanga namnye kubo ngaphandle koKalebhi unyana kaYefune noYoshuwa unyana kaNun.+